काम पर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो « नेपाली मुटु
« चक्रेको चक्रिय प्रधानमन्त्री
कस्को हो यो मोबाइल नम्बर ? »
अचम्म छ । जब–जब नयाँ सरकार बन्ने समय आउँछ, मधेसी दलहरुमा अनौठो एकता देखिन थाल्छ । यिनीहरुमा यत्ति आत्मियता भेटिन्छ कि यिनीहरुको बोली र चाहना पनि एउटै बन्छ । यो बिशेषता फेरि देखिन थालेको छ । आफुलाई मुलुकको चौथो ठुलो राजनितीक शक्तिको रुपमा उभ्याउँदै मधेसी दलहरु एउटै छाता मुनी उभिएका छन् । मधेसी दलहरुको काम पर्दा भाँडो, काम नपर्दा ठाँडो भने जस्तो छाता संगठन हो, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा । जब काम पर्छ यिनीहरु यही छाता संगठन मुनी गोलबन्द हुन स्वतन्त्र छन् र, जब सरकारमा जानका लागि भागवण्डा लाग्न थाल्छ तब फेरि छाताबाट हट्न स्वतन्त्र छन् । मोर्चाबाट हट्ने साथ मोर्चाका विरुद्धमा चर्का भाषण पनि गरि टोपल्छन् । तर पनि पुनः मोर्चामा गोलबन्द हुन यिनीहरुलाई कुनै सकस पर्दैन । यत्तिको लोकतन्त्र त सायदै अरु कुनै छाता संगठनमा होला ।
यो मोर्चाको अर्को बिशेषता पनि छ । यो मोर्चामा पुगे पछि सबै सिहं जस्तो गज्रिन थाल्छन् । मधेसी जनताको हवाला दिदै अनेक शर्तहरु अगाडी सार्छन् । यो पाली पनि इतिहास दोहोरिन थालेका छ । यो लोकतान्त्रिक पद्दतीमा गोलबन्द हुने बित्तिकै मधेसी दलका नेताहरु आफु भित्रबाट पनि प्रधानमन्त्री दाबेदार छ भनेर च्याँखे थाप्न थालेका छन् । हुन पनि जति ठुलो च्याँखे त्यती राम्रो कमाई नै त हुने हो नि ।
यो मोर्चा च्याँखे थाप्ने खाल मात्र हो भन्नलाई कुनै सबुद प्रमाण चाहिन्न । मधेसी दलको विगत हेर्ने बित्तिकै स्वयम् सिद्ध हुन्छ । त्यै पनि सँधै अस्तित्वमा आउँने लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लोकतन्त्रलाई चै मान्नै पर्छ बा ।
This entry was posted on July 16, 2010 at 10:28 pm	and is filed under मेरो भन्नु. Tagged: कुर्सीकप, मोर्चा, सरकार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.